Cherish, oo la aasaasay 1995, waxay ku taal Yiwu, Shiinaha, caasimadda badeecooyinka yaryar ee adduunka. Waxay diiradda saareysaa naqshadeynta wax soo saarka gacanta ee DIY, wax soo saarka iyo suuqgeynta shirkadaha wax soo saarka xirfadeed. Hadafkeenu waa inaan wadno iibinta macaamiisha iyada oo loo marayo naqshad cusub, tayo sare ...
Ku saabsan dunta daabacan
Jeceshayaasha soosaarayaasha dunta daabaca leh is-soo-saar iyo iibin, soosaarayaasha asalka dhabta ah, tiro badan iyo qiimo jaban iyo qiimo hooseeya, isha gacanta ugu horreysa, tiro badan oo mudnaan leh, Waxyaabaha soo-saarka ah waxay doortaan alaabta ceeriin oo tayo sare leh, kuwaas oo aan fududeyn dabin, ma fududa in ...
Kabaar-gacmeedku waa ereyga guud ee qaab kasta oo qurxin ah oo lagu dhejiyo dharka leh cirbadaha iyo dunta.
Kabaar-gacmeedku waa ereyga guud ee qaab kasta oo qurxin ah oo lagu dhejiyo dharka leh cirbadaha iyo dunta. Waxaa jira laba nooc oo daabac leh: Dawaar xariir ah iyo daabac baal ah. Xariir ama xariir ama xargo kale ayaa lagu muday irbad naqshad gaar ah leh iyo midab midab daabac leh leh ...